Poa-basy tany Mahitsy :: Vehivavy lehibe ahiana ho matin' ny fahatairana • AoRaha
Poa-basy tany Mahitsy Vehivavy lehibe ahiana ho matin’ ny fahatairana
Notafihin’ny dahalo mpangalatr’omby ny fokontany iray tany Ambohimanjaka Mahitsy, ny alin’ny zoma lasa teo. Nisy vehivavy lehibe iray, roa amby valopolo taona, namoy ny ainy nandritra izany, izay voalaza fa taitra tamin’ny poa-basy nirefodrefotra nataon’ireo dahalo.
Nambaran’ny mpitandro filaminana fa «mpifanila vodirindrina amin’ireo voaroba omby io zokiolona io. Miara-mipetraka aminy ao amina trano iray ny zanany sy ny zafikeliny. Ireto farany no nahita azy nitambotsitra sy tsy nahatsiaro tena, nandritra ny tifitra variraraka nataon’ ireo malaso».
Nony efa lasa ireo dahalo, vao afaka niantso vonjy ny zanak’ilay vehivavy. Tsy nisy azo natao intsony nanavotana ny ainy. Voamarin’ny mpitsabo, araka ny fanampim-baovao voaray, fa noho ny fahatairana no nitarika ny fahafatesany.
Sambany no voatafika sy nitrangana halatr’omby ny fokontany iray eny Ambohimanjaka Mahitsy. Tombanana ho anisan’ny antony nanaitra an’ilay zokiolona ny fisian’io tranga, tamin’ny zoma alina io. Omby iraika amby telopolo no lasan’ireo andian-dahalo teo an-tanàna. Nanapoaka basy izy ireo ho fampitahorana ny mponina. Tsy nisy ny olona naratra na namoy ny ainy nandritra ireny.
Milaza ho tsy nahita poti- bala teny an-toerana ny zandary. Nitantara ny mponina fa feom-basy vitsivitsy no heno. Ny ampitson’io (Ndlr: alin’ny sabotsy lasa teo), notafihin’ny dahalo ihany koa ny fokontanin’ Andranomasina, ao amin’ ny kaominina Ambohi- manjaka ihany. Omby telo no very. Nieren-doza ny mponina.
Efa any am-panarahan-dia an’ireo dahalo ny zandary avy ao Mahitsy, amin’izao fotoana izao. Fantatra fa efa misy tafaverina ireo omby voaroba. Mitohy ny fanenjehana.
Fotodrafitrasam-pifamoivoizana :: Hoarenina tanteraka ny lalan’ Itaosy sy Ampitatafika